Ibsa Ejjannoo Jila Miseensota ABO – Idil Addunyaa! |
Home Afaan Oromoo Ibsa Ejjannoo Jila Miseensota ABO – Idil Addunyaa!
Ibsa Ejjannoo Jila Miseensota ABO – Idil Addunyaa!
Ibsa Ejjannoo Jila Miseensota ABO – Idil Addunyaa:
“Kaayyoon ABO ifa irbuu wareegamtootaa ti. Irbuu hin dagatnu, irbuu irraa hin maqnu!”
Hagayya 15 bara 2020, Waltajii HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa fi hogganooti,Qondaaloti,miseensota ABO biyyoota aduunyaa adda addaa keessa jiraatan irratti argaman waliin jila guddaa sararaa ammayyaa (online) ta’e milkiin xumurame. Waltajjii kana irratti HD ABO Jaal Daawud Ibsaa argamuun,haala yeroo fi walii gala sochii siyaasa Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu irratti miseensotaaf ibsa baldhaa kennaniiru.
Dhimoonni geo-politica biyyattii baldhinaan ibsamee “ ABOn Ummata Oromoo qaba,Ummanni Oromoo ammo ABO qaba, ABO balleessuun kan dandayamu yoo ummanni Oromoo bade qofa, Kanaaf dhaaba isaa ABO kan tikfatu ummata Oromoo dha” jechuun HD-ABO ibsanii jiru. Walumaa gala rakkoon siyaasa Ethiopia keessa jiru miiraan qaggeefamuu keessaa bahee tasgabbaawanii shafxii tokko malee yoo mariyatan qofa; kanaaf ammo ummanni Oromoos ta’e ABOn qophii dha jedhameera.
Kutaaleen keenya wagga waggaan Kora Gamtaa ykn Kora Waggaa godinalee keenya keessatti godhatnu bara kana keessa sababi COVID-19 qaamaan walitti dhufnee walgahii guddaa akkasi godhatuun addunnya marattu waan dhorkameef Kutaaleen bakka jiranitti karaa Zoom Technology wal arguun Kora geggeeffatne. Kanumaan wal qabatee Kutaaleen Godina keenya gara garaa keessatti toorbanoota darban keessa Kora godhanne akka Idil Addunyaatti walitti dhufuun Hagayya 15, 2020 karuma Zoom Video conferencing Kora guyyaa tokko geggeffatuun mare ballaa fi muuxannoo wal jijjiiruun yeroo jalqabaatiif nuti miseensotni ABO biyya alaa waltajji tokko irratti wal arguu dandeenyee jirra.
Haallan yeroo amaa, dhimmoota qabsoo saba keenyaa fi egeree irratti marii bal’aa gaggeessanne. Kana irraa ka’uudhaan nuti miseensotni ABO Biyya Ambaa Idil-addunyaa Waltajjii Waliigala Jila miseensotaa guyyaa har’aa, Hagayya 15 bara 2020 milkiin xumurannee jirra. Biyyoota Ardii Africa Kibbaa, Uganda, Kyny, Sudan , Giddu-galeessa Bahaa, South Korea, Europe, UK, Scandinavia, Australia fi NZ, Canada, USA fi kanneen biroo jiraannu waltajjii Idil-addunyaa kana irratti haala biyyi fi jaarmayaan keenya keessa jiru, egeree qabsoo keenyaa fi dirqamoota nu eeggataa jiran irratti bal’iaan mariyannee ibsa ejjaannoo itti aanu kana baasannee jirra.
1. Dhaabni keenya ABO haalli walxaxaan siyaasaa biyya Ethiopia keessaa karaa nagaa akka furamu barbaadaa ture. Barbaadaas jira. Gaaffiin sabni keenya Oromoon barootaaf gaafatan, kan bilisummaa, haqaa fi hiree ofii ofiin murteessachuu kara itti furmaata argatu irratti cichaa fi qulqullummaan hojjechaa jira. Haala akkaan rakkisaa keessatti tattaafachaa har’a gahee jiru kanas ni dinqisiisanna. Wareegama ulfaataa akkasii baachuu fi bahachaa jiraachuu isaattis deggersi keenya yoom illee jabaatee itti fufa.
2. Karaa nagaa furmaata biyyaaf tolu, waliin jireenya sabootaaf mishuu fi egeree biyyattii gara tasgabbiitti geessu dagachuudhaan haala hin barbaachisneen diinummaadhaan wal dura dhaabbachuuf tarsimoo yero yerootti bifa gara garaan saganteessamanii dhaaba keenya ABO irratti aggaamatamaa jiru cimsinee balaaleffanna.
3. Hokkarrii fi jeequmsa kan humna waraanaa, humna hidhatoota mootummaa fi tikaan Oromoo fi saboota akka Oromootti bobbaasamaa jiru lola hin barbaachisnee fi dhumaatii akkaan ulfaataa tahetti geessuuf akka jiru akkaan nu yaaddessa. Kanaaf ammoo yaada furmaataa ABO akeekaa turee fi sagantaa isaas itti qabu hundaan dhaggeefatamuu qaba ture. Ammas furmaatni jiru sanuma tahuu itti amanna.
4. Fedhii dorgommii siyaasaa fi dhuunfannaa aangootiin wal qabsiisanii ABO fi saba Oromootti duuluun badii caalaatti dhufuuf malutti gumaachuu tahee nutti mul’ataa jira. Kanaaf ammo ABO gaafatama seenaa fokkataa akkasii keessaa bilisa tahuu isaa hundaan akka hubatamu dhaamsa keenya dabarsina.
5. Amma illee hireen karaa dhugaatti geessu kan ABO jalqabuma irraa dhiheessaa turee fi ammas itti jiru karaa tokkicha furmaata tahuu danda’u fudhatamuus qabu jedhnee amanna.
6. Raooro Ummata keenya irratti gara jabinaan raawatamaa jiru balaaleefachaa karaa dandeenye undaa saxiluuf murteefanne.
7. Hoganonii fi Miseensonni ABO akkasuman kanneen badi tokko malee hidhaman haal–dure tokko malle akka gadi dhiifaman gaafanna.
8. Ibsa Hogannoon ol–aanoo fi Miseensanoo GS biyya keessaa baasan fi Murtillee fudhatan Gutumaatti deegarra. Hujjira olmaya isaafiis ni hojjanna.
9. Furmaatni siyaasaa fi nagaa Oromoo keessatti fi Oromia keessatti tahu furmaata waliigalaa biyyattii, kan sabootaa fi sab-lammootaa tahuu guddisnee itti amanna. Kanaaf, sabaa fi sab-lamootni akka lammii biyyaatti waliin hiriirree duumessa hokkoraa fi jeequmsaa irra aanuu akka qabnu yaamicha keenya dabarsina.
10. Yaada, beekumsaa, dinagdee fi bifa hundaan kan qasoon saba keenyaa nu irraa eegu bahuuf amma illee waadaa keenya haaressina. Hawaasni keenya bal’aanis keessaa fi alaan qabsoo bilisummaa, kan haqaa fi nagaa ilmaan isaa itti wareegamaa as gahee jiru kana bakkaan gahachuuf saboota akka isaa waliin hiriiree mirga abbaa biyyummaa isaas jabeessee itti fufu yaamicha sabummaa taasisna.
Injifatnoon Ummata Bal’aaf!
Jila miseensota ABO biyya alaa
Hagayya 15, 2020
Previous articleThe Attack On Oromo Nation by Ethiopian Government is An Attack On All
Next articleBBC: Hidhattoonni Maalii pirezedaant Ibrahim Boubacar buqqisan..
Breaking Simbirtuu! Gareen PP Oromiyaa Boombiin Haleelame!
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qaallittiitti geeffamuun isaanii dhaga’ame.
MY MESSAGES TO THE TOP LEADERS OF OLF, OLA, OFC
Falmataa - January 21, 2021 0